Mayors Message - Zulu - Umlalazi Local Municipality
Home | Council | Mayors Message - Zulu
Message from his worship - Councillor T B Zulu (Zulu)
Sekuyileso sikhathi sonyaka lapho khona sonke siyaye sicabange izinto esizenze unyaka wonke. Kanti ezinye zezinto ezenzekile uma sizicabanga- azisijabulisi thina njengomasipala kuphela, kodwa sigqugquzelwa ukubona umphakathi wethu ugcele injabulo ebusweni ngenxa yomsebenzi esiwenzayo . Kulesisikhathi sonyaka abanye bethu bazobe behleli nemindeni yabo abanye bazobe bevakashile kufanele ukuthi sibenze bawathokozele amaholidi abo phansi kuka maspala wethu.
Unyaka 2013 bekuwu nyaka onzima kithi sonke singabala singa qedi izimpilo zabantu abaswelekile phansi kwalo maspala wethu. Abanye babo ukusweleka kwezintombi ezinhle ezaziphuma emhlangeni kwa Nongoma. Saphinde salahlekelwa futhi engozini yebhasi okwakukhona abadlai bethu ababephuma kwi “district games” zombili lezizizngozi zehlakale cishe endaweni eyodwa bekuyizehlakalo ezibuhlungu kakhulu kithi kodwa siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzosihlenga ezingozini ezinjengalezi esikhathini esizayo.
Ngaphandle kwezingozi zomgwaqo, siphinde saba nokuhlaselwa nokubulawa kwabantu phansi kukamasipala wethu. Amalunga ayisihlanu omndeni owodwa wakwa Mnyango ku ward 4, nokubulawa kwabantu base Ngudwini ku ward 5, nokunukubezwa ngokocansi kumuntu omdala ku ward 22, ngezinye zezigameko lezi ezenzekile kulo nyaka futhi siyathandaza ukuthi konyaka u2014 angeke sibenazo izigameko ezinjenga.
2014 unyaka wokhetho okusho ukuthi unyaka uzobe umatasatasa kithi sonke, ngifuna ukunigqugquzela malunga omphakathi wase Mlalazi ikakhulukazi laba ababebhalise ukuvota okokuqala. Ngomhlaka 9 no mhlaka 10 November 2013 u-IEC wavulazonke iziteshi zokuvota ukuze abantu bakwazi ukuzibheka ukuthi babhalise nalabo ababengakabhalisi, bakwazi ukubhalisa. Siyajabula ukuthi abantu abawu 11 000 ababhalisile abaqalayo ngqa. Kodwa asingakhohlwa ukuthi kusenabanye abawu 11 000 abakangabhalisile phansi kuka Masipala waseMlalazi.
Ake ngithathe lelithuba ngigqugquzele bonke abawu 11 000 abangabhalisile ukuba bahambe babhalise kushaye usuku lokuvalwa ukubhalisa sebebhalisile kufanele sikuqikelele ukuthi siyawujabulela u 20 years wokuba ama “born frees”
Ngokukhulu ukujabula ngicela ukunisiza ukuthi ukwenza impilo ibelula kumphakathi wethu ngomhlaka 26 November 2013 sivule Checkers eGingindlovu obekufanele bahambe beye eShowe noma eMndeni ukuyothenga ngoba bebengenayo indawo yokuthengwa yabo.
Sikhathazekile ngendaba ye “traffic” emigwaqeni wethu ku Osborn road eShowe, sibheka izindlela eziningi zokuyilingisa lenkinga sisebenza kanzima ukuba sense izimpilo zenu zibelula.
Ngicela ukuthatha lelithuba ukunifisela nonke nemindeni yenu ukuba nonyaka ka 2014 obusisiweyo.